PressReader - Isolezwe: 2018-07-13 - Qaphela ibanga uma ulandela amaloli amakhulu
Qaphela ibanga uma ulandela amaloli amakhulu
Isolezwe - 2018-07-13 - EZEZIMOTO -
KWAPHINDA kwasa sahlangana futhi kulo leli shashalazi kwelakho lodumo eliwela umfula ugcwele. Mangisho ngithi sonke masiwe ngeminwe phezu kwezinkinobho zama-hazard. Amadlingozi ami asengibeke emgwaqweni njengenhlalayenza.
Awanamhlanje ama-hazard ngiwahlokoza ngisemgwaqweni uN2 ngilisingise enyakatho ngalapho umgwaqo uchezukela eHluhluwe ezweni likaphayinaphu.
Ngisahamba kamnandi kuleli lizwe elande ngezihlahla zomkhanyakude. Uma ngiqeda ukudlula egaraji likaphethroli iBonjour, ngibone izimoto sezishaya ama-hazard phambi kwami.
Nami ngishaye esidume ngazo ngicindezele amahazard ngixegise unyawo emuthini ngize ngime.
Siqale ukuxaxama kancane kancane saze safika lapho inkinga ikhona.
Into eyenzekile lana ilolikazi elihudula izinqola ezimbili lilayishe umoba libhongcule inqola esemuva ligijima yasala emgwaqweni nomthwalo.
Lesi sigameko singenze ngakucabanga ukuthi abafundisa ukushayela namakhosi omgwaqo abakukhuthazi ukuthi kulandelwe imoto eduze.
Ngisacabanga ngikhumbule ibhayiskobho engake ngayibuka ebizwa ngeFinal Destination lapho iloli elalithwele izingodo laphukelwa yisipalaki maqede izingodo zagcwala umgwaqo.
Ukube ngesikhathi inqoduka le nqola bekunemoto eseduze ngabe kukhulunywa enye indaba.
Siyazi ukuthi uma silandela amaloli isikhathi esiningi sisuke sesicikekile sijahe ukwedlula yingakho siwahlala ebhampini, ikakhulukazi thina bashayeli bezimoto ezincane.
Amanye amaloli asebhaliwe ukuthi awavumelekile ukungqengqa ngomugqa ophuzi ngaleso sizathu sokuthi kunobungozi obukhulu uma engqengqa osebeni lomgwaqo lokho kudala ukuthi umthwalo uwadonsele esihluthu.
Lesi simo esiphoqe ukuthi kuze kubizwe ujibha omkhulukazi sidale ukuminyana kwezimoto njengoba bese kusebenza ukuthi ubani ofike kuqala ngokulawulwa ngamaphoyisa omgwaqo. Kube wumzukuzuku ukuwuka inqola ebisifofobele phakathi nomgwaqo.
Cabanga-ke ngoba uma isinqodukile nomlilo ohambisa ukukhanya kuyona awusekho. Sekusiza khona ukuthi kunezimoto eziningi namaphoyisa aseHluhluwe nawomgwaqo aselekelela ukukhomba izimoto ukuthi zedlule kanjani kule nkanankana.
Sibonga khona ukuthi asizwanga zindaba ezimbi kodwa kubalulekile ukuthi zihlolwe izinqola ngoba ngiyasola leya yakhunyulwa yizikhisi ezigcwele kuloya mgwaqo.
Umbono wama-hazard uthi qaphelani amaloli adonsa amankonyane anobungozi obuningi ezimotweni ezincane.
Sithi undlelende akabulali ngakho kufuneka isineke esihambisana nokushayela ngesinono uma ulandela le mihuqa yamaloli.
Enjalo nje anomkhuba wokuxebula amasondo engasayalezanga nokuthi uma umdweshula wesondo usala emgwaqweni ufane nokunyathela insimbi ebukhali emasondweni ezimoto ezincane.
Amanye ayabhalwa ukuthi angamamitha amangaki amanye aze abhalwe ukuthi uma ungaziboni izibuko zekhanda lalo, yazi ukuthi nomshayeli walo akakuboni.
Kubalulekile ukuthi njalo uma uzokwedlula noma ufuna ukusika lezi zitimela zasemgwaqweni, kube uyabona kahle phambili.
Hhayi-ke sesingawavala la ama-hazard ethu kukude kwaMakhasa lapho ngiya khona. Okwamanje asiqhubeke nokushayela ngokucophelela nokugcina ibanga esilandela ngalo livulekile ikakhulukazi uma silandela amaloli.
Uma kungenjalo usungasithinta ngokungena ku: Igedlela lami with Sthembiso Shangase kuFacebook. Yimi owenu nali ikheli ngezansi hazardiso@gmail.com
ABASHAYELI kumele baqaphele uma beshayela eduze namaloli amakhulu Isithombe: Markus Spiske